Qiso Ka Dhacday Koofurta Soomaaliya (Nin Hadal Kaliya Ku Qanciyay Nin Kale Hantidiisa Dhici Rabay) – Shabakadda Amiirnuur
Qiso Ka Dhacday Koofurta Soomaaliya (Nin Hadal Kaliya Ku Qanciyay Nin Kale Hantidiisa Dhici Rabay)
July 4, 2019 4:06 pm by admin Views: 360
SAWIR HORE NIN SAKO LA SIIYAY SH HOOSE
Caqliga wanaagsan mararka qaar ayaa wuxuu ka roon yahay itaalka, waxaana jeclahay inaan halkan idinkugu soo gudbiyo qiso cajiib leh oo ka dhacday Koofurta Soomaaliya. Waa qiso kooban balse cilmi iyo garasho badan laga helayo, marna kaa qosol siineysa!
Haddaan sheekadeeda horey u galo. Nin suufi ah oo si hoose u uruurinaya Siyaararo (Lacago) ayaa wuxuu u tagay oday xoolo ku heysta baadiyaha degmada Qoryooley oo la yiraahdo Xaaji Axmadeey Cali, isagoo ninkii ku war galiyay inuu bixiyo siyaarada Sheekh C/qaadir Jiilaani oo uusan muddo 8 sano ah ka qaadin maadaama dhulka Al-Shabaab la wareegeen dadkuna wax fahmeen.
Ninkan Suufiga ah oo ka yimid dhanka Muqdisho ayaa odaygii u sheegay inuu xoolo badan bixiyo, balse isma weydiin waxa iska badalay odaygan iyo caqiidadiisa maadaama ay 8 sano is moogaayeen, waxaana dhacday in Suufigii la weydiiyo su’aal ahayd: “Sidaad u bixi i tiri siyaarada haddaan u bixiyo muxuu aakhiro ii tari karaa Sh/C/qaadir?”
Ninkii ayaa sidii caadadaba u ahayd Suufiyada wuxuu bixiyay jawaab ah in Sheekh C/qaadir Jiilaani uu maalinta aakhiro garabkiisa ku qaadato islamarkaana Siraadka mootinayo waliba si il-biriqsi ah.
Odaygii ayaa ninkii ugu jawaabay “Markuu garabka i saaro bal ka waran siduu ii wado hadduu Naarta igu rido” Suufigii ayaa aad uga xanaaqay arrintan wuxuuna dareemay in wacyiga dadku is badalay, ninkanna aaney xoolo kasoo socon, markaasuu ka tagay isagoo haaraamaya!!.
Dabcan Sheekh C/qaadir, sida taariikhdiisa ku xusan wuxuu ahaa nin wanaagsan, balse suufiyada ayaa ku been abuurtay iyagoo ka qoray Buugaag caan ah oo ay ku qoreen inuu hadda ka hor malag kasoo celiyay naf uu qof ka qaaday.
Sidoo kale waxaa la wada ogsoon yahay iney illaa iyo hadda aaminsan yihiin in Sheekh Uweys uu Geel dhintay nafta ksuoo celiyay, sidaba uu horey u sheegay Macallin Maxamuud oo ah gudoomiyaha kooxda Suufiyada ee Guriceel.
Haddaba qisadan oo aan kasoo xigtay Xaajo Axmadey Cali qudhiisa ayaan xilligan jecleystay soo bandhigisteeda maadaama ay ka marqaati kacayso sida uu wacyiga bulshada u koray. Maanta waxay xaaladdu mareysaa suufiyadii dadka indha-sarcaadka ku dhici jirtay in hadal yar oo kooban lagu qanciyo, ka hor inta aananba la gaarin in nusuus sharci ah loo soo qaato.
Al-Shabaab ayaa waxay dacwada ku faafiyeen tuulooyinka iyo baadiyaha fogfog oo aaney markii horey culimadu tagi jirin.